Kenya oo xuseysa Sanadguuradii tobanaad ee ciidankeeda ku suga... | Universal Somali TV
Madaxweynaha Kenya Mr Uhuru Kenyatta ayaa Sabtida maanta ah hogaaminaya dabaal-dega sanad guuradii 10-aad ee ka soo wareegtay markii ciidanka difaaca Kenya ee KDF-ta loo yaqaan gudaha u soo galeen Dalka.
Sanadguurada oo ku beegneyd 14-kii bishan October ayaa suura galin maadaama hogaamiyaha Kenya uu ka qeyb galay shirka amniga qaramada midoobay ee magaalada New York.
Mr Kenyatta oo la kulmay madaxda caalamka iyo mas,uuliyiinta sare ee qaramada midoobay, ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay ka shaqeynta amniga geeska afrika iyo guud ahaan qaarada gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo dagaalyahanada ku sugan waqooyiga dalalka Afrika.
Xaflada oo ka socota saldhiga dhexe ee Milatariga Kenya oo loo yaqaan Kahawa oo ku yaal magaalada caasimada ah ee Nairobi, ayaa inta ay socoto waxaa la filayaa in Mr Kenyatta uu xariga ka jaro isbitaal weyn oo ciidamada milatariga oo loogu magac daray Nairobi Region Hospital.
Milatariga Kenya ayaa gudaha dalka kaga soo tilaabay xadka magaalada dhobley 14-kii bishii October sanadkii 2011-ka oo hada laga joogo toban sano, iyaga oo ku andacoonayay in dagaalyahanada Al-shabaab ay ka soo afduubteen xeryaha qaxootiga Dhadhab muwaadiniin u dhashay dalalka reer Galbeedka.
Howlgalkaan ayey Kenya waqtigaas ugu magac dartay difaaca dalka oo luuqada Sawaaxiliga loogu yaqaan Linda Nchi, waxaana deetana ay si rasmi ah ugu biireen ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom.
Tan iyo wixii waqtigaas ka danbeeyay Kenya waxay wajaheysay weeraro dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha, waxaana ka mid ahaa weerarkii Wast Gate Jaamacada Garissa iyo weeraro lagu qaaday gawaarida dadweynaha iyo goobo lagu caweeyo oo ku yaal gobolada waqooyi Bari iyo Xeebta.
Kan-xigaToban sano oo laga jooggo dilkii Muam...
Kan-horeWeerar ka dhacay dalka Norway oo shan...
64,701,318 unique visits